राजनीतिक दलका नेताहरु के गर्दै छन् त ? तरामधेकासका बाढीपीडितका लागी - Nepal News - Latest News from Nepal
राजनीतिक दलका नेताहरु के गर्दै छन् त ? तरामधेकासका बाढीपीडितका लागी
By nepalnews	 Last updated Aug 14, 2017
काठमाडौं,३० साउन । राजनीतिक दलले आफूहरु तराई मधेसका बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुटेको बताएका छन् । तर, धेरै दलले उद्धारको जिम्मा जिल्ला कमिटीहरुलाई नै दिएका छन्, जो आफैं बाढीबाट पीडित छन् ।
उद्धार तथा राहत टोली पठाउन चाहेको तर, सडक सम्वन्ध टुटेको र अधिकांश भूभाग जलमग्न भएकाले नसकिएको दलका नेताहरुको गुनासो छ ।
आगामी असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनाव हुन लागेका कारणले गर्दा पनि दलहरु त्यहाँका जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने ‘प्रेसर’मा छन् । यही प्रेसरका कारण कसले बढी सहयोग गर्ने वा गरेको देखाउने भन्नेमा दलहरुवीच होडबाजी हुन थालेको अवस्था छ ।
कुन दल के गर्दैछन् र ?
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको एक महिनाको तलब बाढी पीडितलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । उसले पार्टीका नाममा पनि राहत कोष खडा गरेर आफ्नो समर्थक तथा सुभेच्छुकसँग सहयोगका लागि अपील गरेको छ ।
नेता गगन थापा भन्छन्, बाढी पहिरो प्रभावित नभएका जिल्लाका साथीहरुले आफैं राहत संकलन गरेर वितरण गर्न पनि पठाउन सक्छन्, पार्टीले खोलेको खातामा रकम जम्मा गरेर पनि सहयोग गर्न सक्छन् ।’
थापाको टोलीले अर्को अभियान पनि चलाएका छन् । काठमाडौंमा ६ स्थानमा राहत संकलन केन्द्र बनाइएको छ । त्यहाा जम्मा भएका राहतहरु प्रभावित क्षेत्रमा लगेर बााडिनेछ, यसका लागि बाल्टिन बनाइएको छ । जसमा औषधि, कपडा लगायतका अत्यावश्यक बस्तुहरु राखिनेछ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रभावित जिल्लाहरुमा जनवर्गीय संगठनहरुलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले कुन जिल्लामा कुन जनवर्गीय संगठनलाई खटाउने भन्नेसमेत कार्यविभाजन गरेको छ ।
मधेसमा सहयोगका लागि पहाडका जिल्ला कमिटीहरुलाई समेत आग्रह गरिने एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले उद्धार तथा राहतमा जुट्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेको छ । सोमबार दिउँसो बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकले राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने माओवादी हेडक्वार्टरले जनाएको छ । साथै वाइसीएलका कार्यकर्ताहरु उद्धारमा खटिइरहेको माओवादीले बताएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीले बाढी पहिरो पीडितहरुका लागि राहत संकलन गर्न समिति बनाएको छ । राहत संकलन सुरु भइसकेको भन्दै नयाँ शक्तिका नेता गंगा श्रेष्ठले भने, भोलि सप्तरी र सुनसरीमा ५ हजार केजी चामल वितरण गर्छौं ।’
त्यसपछि राहत संकलन गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने योजना रहेको नयाँ शक्तिले जनाएको छ ।
के गर्दैछन् मधेस केन्द्रित दलहरु ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०, संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शनिबार नै विज्ञप्ति निकालेर बाढी तथा पहिरोले धनजनको क्षति भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले युद्धस्तरमा राहत प्रदान गर्न र बाढी तथा पहिरो प्रभावित स्थानहरुलाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आपतकालीन विपद व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘पार्टीले नेता कार्यकर्तालाई बाढी पीडितहरुको उद्धार तथा राहतमा जुट्न आहृवान गरेको छ । तर, उनीहरु आफैं पनि बाढीबाट पीडित छन् ।’
झाका अनुसार पार्टीको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । तर, सांसदहरुले एक महिनाको तलब दिने राजपाको तयारी छ । यसबारे आज निर्णय हुनेछ ।
त्यसैगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले राहत संकलन र वितरणको काम सुरु गरेको बताएको छ । सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, पर्सा लगायतका जिल्लामा प्रारम्भिक रुपमा खाद्यान्न, कम्बल लगायतका सामाग्री वितरण थालिएको छ ।’
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राहत संकलन र वितरणमा जुट्न पार्टी कार्यकर्तालाई आहृवान गरेका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रीय स्तरमा पनि राहत संकलन गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, आज १ बजे बैठक छ, हाम्रा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुबाट पनि सहयोग संकलन गर्छौं ।’
मधेस केन्द्रित अर्को दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले उद्धारमा सहयोग गर्न पार्टी कमिटीहरुलाई खटाएको बताए । उनले भने, राहतका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गर्दैछौं ।’साभार अनलाईन खबर
चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ को अर्को नयाँ गीतको तयारीमा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन , राहत जारी